ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေဒီယို Archives - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»မာတီမီဒီယာ»EPRP ရေဒီယို»Category: "ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေဒီယို"
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ။ ။ EPRP ရှမ်းရေဒီယိုအဖွဲ့မှထုတ်လုပ်တင်ဆက်သော သတင်းများ၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၊ပြဇာတ်များ၊တိုင်းရင်းသားဒေသခံများအကြောင်း၊တိုင်းရင်းသားဒေသများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း။ ( ရှမ်းဘာသာဖြင့်အစီအစဉ်အားမကြာမီတင်ဆက်မည်ဖြစ်ပါသည် )
ဖေဖော်ဝါရီလ တတိယအပါတ် ၁၅.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ် News (1) တရုတ်နိုင်ငံ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် EAOS PPWT တို့ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးတွင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့သတင်း News (2) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMPS) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (အန်စီအေ) ကိုနေပြည်တော်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သတင်း News (3) အန်စီအေတွင် ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ (အေအန်စီ) ပါဝင်ရန် မလွယ်တော့တဲ့သတင်း News (4) အန်စီအေ လက်မှတ်ရေးထိုးပီးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ဖွဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ စတုတ္ထပတ်အတွင်း ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာတွင် တွေ့ဆုံမည့်သတင်း Interview : ဒေါ်နန်းငွေကြည် မှ သူမရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ပင် ဆင်ခြောက်ကောင် တံဆိပ်တိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းလုပ်လာတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက် Information : သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်း Program : သျှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းသမိုင်း သမိုင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ပင်လုံမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ၇၁ ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားနှင့်လူငယ်အမြင် တို့အကြောင်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 9, 2018 EPRP
ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ် ၉.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ် News (1) ထိုင်းနိုင်ငံဗိုလ်ချုပ်ကြီး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ၂နိုင်ငံ စစ်တပ်များခင်မင်ရင်းနှီးလာစေဖို့အတွက် နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း News (2) RCSS/SSA ဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျှန်းတွင် သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပရာ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌအဖြစ် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ) အားပေးအပ်လိုက်တဲ့သတင်း News (3) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သိန္နီမြို့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များသတင်း News (4) (၇၁)ကြိမ်မြောက် သျှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့တွင် TNLA က RCSS ကို သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် စစ်မျက်နှာဖွင့်လှစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း News (5) UNFC နှင့် PPST တို့ပထမအကြိမ် လွယ်တိုင်းလျှန်းတွင်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း Interview : သျှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဆရာတော်အရှင်မဟော်သဓာမှမွေးနေ့မင်္ဂလာ ကိုမမေ့သင့်သောအရာများအကြောင်းပြောဆိုချက် Information : Targeting . Life . Skills Program : သျှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့တွင် ပြုလုပ်သောသျှမ်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနား အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2, 2018 EPRP
ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအပါတ် ၂.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀မိနစ် News (1) သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဌာန ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဒု-၀န်ကြီးနေရာအတွက် အစိုးရက ကမ်းလှမ်းလာတာကိုငြင်းပယ်လိုက်တဲ့သတင်း News (2) ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေးက လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့မလိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြောဆိုတဲ့သတင်း News (3) သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွတ်ဆစ်ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ပထုမ်းထားနီး တက္ကသိုလ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး (M.P.A) အထူးပြုဘာသာဖြင့် မဟာဘွဲ့ဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း News (4) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ SLND မှ လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းပြုလုပ်တဲ့သတင်း Interview : Kaw Dai Orgonization ရဲ့EC တာဝန်ခံဖြစ်သော နန်းဟန်ခမ်းမှလဲချားမြို့နယ် ၀မ်ယိမ်းသျှမ်းအမျိုးသားစာသင်ကျောင်းရှိလာခြင်းနှင့်ကျောင်းရဲ့ပညာအရည်အချင်းအကြောင်းပြောဆိုချက် Information : ကလေးဘ၀တိုးတက်ပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်များ Program : တောင်ကြီးမြို့သျှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခန်းမတွင် ကျင်းပသွားသော Tai History Seminar အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇနျနဝါရီ 26, 2018 EPRP
ဇန်န၀ါရီလ နောက်ဆုံးအပါတ် ၂၆.၁.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ကြာချိန် (၁၅း၀၀)မိနစ် News (1) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင်ပြုလုပ်သွားသော သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အစည်းအဝေးတွင် ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲ ၂နေရာဝင်ပြိုင်မည့်သတင်း News (2) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင် မိုင်းငေါ့မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်နှင့်သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA) တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း News (3) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU)တို့အနေဖြင့် မကြာခင်NCA စာချုပ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သတင်း News (4) တတိယအကြိမ်မြောက် ၂၁ ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးကိုရပ်ဆိုင်းမည့်သတင်း News (5) CUUS ဥက္ကဌ ရာထူးလက်ခံမည့်ကျားဖြူပါတီ ဥက္ကဌနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုတဲ့သတင်း Interview : နန်းနွမ်းမို ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှ အစိုးရထံပညရေးကျောင်း (၂၀)ကျောင်းကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားစာပေသင်ကြားခွင့်ပေးရန်ပြောဆိုချက် Information : သျှမ်းအမျိုးသားနေ့သမိုင်း Program : Shan Youth Network မှသျှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းသီပေါမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ၈ ကြိမ်မြောက် အင်္ဂလိမ်စကားပြောသင်တန်း အကြောင်းတို့ကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇန်န၀ါရီလ ဒုတိယအပါတ် ၁၉.၁.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်၊၊ကြာချိန် (၁၅း၀၀) မိနစ် News (1) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊နိုင်ငံရေးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုင်းဟန်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အပါအ၀င် နားလည်မူ စာချွန်လွှာသုံးခု လက်မှတ်ရေးထိုးနိူင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားတဲ့သတင်း News (2) လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအပတ်တွင် CSSU နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို လွိုင်တိုင်းလျှန်း တွင်ပြုလုပ်မည့်သတင်း News (3) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပအိုဝ်းဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ (PNO) အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ် (ဌာန) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအောင်ခမ်းထီး နဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကို အုပ်ချုပ်ရေး၊ဒေသခံဖွဲ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကို နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း News (4) ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်ရှိငွေ အတက်အကျများသတင်း Interview : သျှမ်းစာပေဆရာကြီး လုံးစိုင်းဖမှစည်းလုံးခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ဘ၀ရောက်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက် Information : ပြည်သူကြောက်ရွံ့နေရသေးသော မိုင်းအန္တရာယ် Program : မြန်မာထိုိင်းနယ်စပ်ရှိ လွိုင်တိုင်းလျှန်း အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းရဲ့အကြောင်း။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇန်န၀ါရီလ ပထမအပါတ် ၁၂.၁.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်၊၊ကြာချိန် ၁၅း၀၀မိနစ် News (1) သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရာမှ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း News (2) လူထုတွေ့ဆုံပွဲများတပ်မတော်ဟန့်တားမှုကြောင့် လင်းခေးတွင်ပြုလုပ်မည့် သျှမ်းအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အကန့်အသတ်မရှိ ရက်ရွေ့ဆိုင်းတဲ့သတင်း News (3) Shan Youth Network မှအင်္ဂလိပ်စကားပြော ၈ကြိမ်မြောက် သင်တန်းကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့တွင် ပြုလုပ်တဲ့သတင်း News (4) တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ် ၈ဖွဲ့ EAO ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ PPST အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့နမ့်ဖူးခမ်းဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း Interview : ရှမ်းရိုးရာ သစ်သီးဝလံတွေထည့်တဲ့တောင်းယပ်နည်းအကြောင်းပြောဆိုချက် Information : ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း Voxpox : နှစ်(၇၀)ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့အပေါ်သုံးသပ်ချက်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၉)
ဒီဇငျဘာ 21, 2017 EPRP
ဒီဇင်ဘာလ စတုတ္ထအပါတ် ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ကြာချိန် (၁၅း၀၀)မိနစ် News (1) သျှမ်းအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့ရှိ ပြည်သူလူထုနှင့်ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာတပ်မတော်ဟန့်တားတဲ့သတင်း News (2) သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် EPRP နှင့် VRT တို့ပူးပေါင်းပြီး GYP.SYB သင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်း News (3) သျှမ်းလူမူကွန်ယက် ဦးဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်အရ (၂) နှစ်တစ်ကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သျှမ်းလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပတဲ့သတင်း News (4) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဆွန်ကော်ရှန်းတို့နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့သတင်း News (5) လာမည့် ၂၀၁၈ တွင်မြန်မာနိုင်ငံကာယဗလ လက်ရွေးစင် စိုင်းချစ်ငွေမှ ကာယဗလနှင့်ကာယကြံခိုင်မှု အားကစားခန်းမ ဖွင့်လှစ်မည့်သတင်း Interview : ဒုဗိုလ်မူးကြီးစိုင်းဦး မှ သျှမ်းအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲလင်းခေးမြို့မှာ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက် Information : လူ့အခွင့်အရေးကြော်ငြာချက် (၃၀)ခွန်း Program : ပင်လုံမြို့တွင် ၁၂ ကြိမ်မြောက် ခေါပုတ်ထောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းတို့ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၈)
ဒီဇငျဘာ 15, 2017 EPRP
ဒီဇင်ဘာလ တတိယအပါတ် ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ နေ့တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ် News (1) NCA စာချုပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်မဟုတ်ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နာယက ဗိုလ်မူးကြီးခွန်ဥက္ကာ ပြောဆိုတဲ့သတင်း News (2) RCSS/SSA , UNFC နှင့် FPNCC လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကို ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်တဲ့သတင်း News (3) မြန်မာနိုင်ငံထဲ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ယခုနှစ်ထဲ သိသိသာသာကျဆင်းသွားတဲ့သတင်း News (4) သျှမ်းအမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU မှသျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း Interview : စ၀်ဟေမာသိုက်မှ တောင်ကြီးမြို့တွင်ကျင်းပသော အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မူရပ်တန့်ရေးနေ့အခမ်းအနား အကြောင်းပြောဆိုချက် Information : သျှမ်းသမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ် Program : 21st TGI တွင်ပြုလုပ်သွားသော Conflict Sensitive Journalism and Anti-Corruption အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယအပါတ် ၈.၁၂.၂၀၁၇ နေ့တွင် ထုတ်လွင့်သည်၊၊ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ် News (1) မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) သျှမ်းပြည်နယ် လွတ်တော်အမတ် ဒေါ်နန်းကောင်ခမ်းမှ မိုင်းရှူးနယ်အတွင်း ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရထံကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းတင်ပြမေးမြန်းခဲ့တဲ့သတင်း News (2) (၀) ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်း FPNCC မဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှ တအောင်းပလောင် (TNLA) နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ( SSPP/SSA) တပ်ဖွဲ့တို့ကြား နမ္မတူမြို့နယ် မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စုအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း News (3) မစ္စတာဟူစိန်က ကျူးလွန်သူကို ရှာဖွေရာအချက်အလက် စုဆောင်းနိုင်ရေးမှာ ဘက်မလိုက်ပဲ လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့သစ်တခုထူထောင်ဖို့ အထွေထွေညီလာခံကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ တောင်းဆိုတဲ့သတင်း News (4) SLND ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုင်းဦးခမ်းမှ သိန်နီမြို့ နမ့်ဆလပ်ဒေသခံအာဏပိုင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လောင်းကစားဝိုင်းပပျောက်ရေးအတွက် ဖြေရှင်းတဲ့သတင်း News (5) ၀မ်ဟိုင်းတွင် ၃၉ ကြိမ်မြောက်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်း News (6) TNLA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းသို့ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်တွင်ဒေသခံ အချို့အား အဓမ္မငွေကြေးတောင်းခံ ခြိမ်းခြောက်တဲ့သတင်း Interview : ညောင်ရွှေမြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ဦးနေမျိုးမှ ပထမဆုံး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတ စ၀်ရွှေသိုက် ရုပ်ထုပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြောဆိုချက် Information : မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့ရဲ့ဘ၀ Program : သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် တာလုံကျေးရွာရဲ့ရွာသားများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ခြင်းတို့အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right &…
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၆)
နိုဝငျဘာ 30, 2017 EPRP
ဒီဇင်ဘာလ ပထမအပါတ် ၁.၁၂.၂၀၁၇ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ကြာချိန် ၁၅း၀၀ မိနစ် News (1) ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ပါတီဥက္ကဌတာဝန်နဲ့ပါတီဝင်အဖြစ် ယနေ့နုတ်ထွက်ခွင့်ပေးဖို့ ပါတီဌာနချုပ်ထံ စာတင်လိုက်တဲ့သတင်း News (2) အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလင်းခေးမြို့တွင် ကျင်းပရန် JICM အစည်းအဝေးတွင် RCSS ကသဘောတူတဲ့သတင်း News (3) လင်းခေးခရိုင် ၊ ကျိုင်းတောင်းမြို့တွင် ပြည်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်မူရှိစေရန်အတွက် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျားခေါင်းပါတီရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်း News (4) ဆီဆိုင်မြို့ သျှမ်းလူငယ်များအဖွဲ့ ဦးဆောင်ပြီး ခြံထွက်သီးနှံရောင်းချရန် ဈေးကွက်များရရှိဖို့ အတွက်မြို့ကြီးများကို သွာရောက်လေ့လာတဲ့သတင်း Interview : တောင်ကြီးမြို့ ကျိုင်းတုံကျောင်း ကောပက ဦးစိုင်းနွတ်မှ သျှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကံဇာတာမြင့် ရိုးရာဓလေ့ အကြောင်းပြောဆိုချက် Information : ဘ၀တိုးတက်စေရန်အတွက် ရှူံးနိမ့်မှုကို မကြောက်ပါနဲ့ Program : ကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာသနာပြု အောက်စဖိုဒ့် ဆရာတော်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာမိ (၅၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတော် မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းတို့ကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )